umatshini wokwenza ipellet uyathengiswa,Ukuthumela kwelinye ilizwe eMzantsi Afrika,Ostreliya,Indiya,Phillippines
Amandla:11kw,isigaba esinye okanye izigaba ezithathu
Umthamo:300~ 500kg / h
Oomatshini bokuchwetheza iPellet babonakaliswa ngokwenziwa komatshini, ukuqhuba okuqhubekayo, kunye nokusebenza okuphezulu. Ingqungquthela yokufa kwe-roller yamkelwe ngentsimbi ye-alloy ukuqinisa uzinzo lwayo kwaye isetyenziselwe oomatshini ixesha elide. Xa uvelisa iipellets ngeKingman pellet mill, Uya kuphumla uqinisekisa ukuba imveliso efezekiswa ngoomatshini bethu bokushicilela ingaphezulu kokuba uyilindele ngokusebenzisa amandla amancinci. Umatshini wethu wokwenza i-pellet nawo unokuqhuba 24/7 ngemini.eyi-pellet ethembekileyo yokwenza oomatshini ababonelela nge-CE kunye ne-ISO 9000 izatifikethi.
Ukufuma kwezinto ezingavuthiyo akukho ngaphantsi komgangatho wesizwe we-15% .Umqhubi wokudityaniswa kunye nomdibaniso wendalo iphela wamkelwe.umatshini wokutya wokutya unokuqhutywa ngemoto yombane okanye ngenjini yedizili.ukusebenzisa itekhnoloji eyahlukileyo inokugqibezela yonke inkqubo yokuphantsi. -Ithala lokomisa, ukupholisa kunye nokujonga kwindawo enye. Iziphumo zibonisa ukuba umatshini wokwenza ukutya okwenziwa zizilwanyana usetyenziswa kakhulu ekusebenziseni umatshini wokudada wepellet kumatshini wokulima izilwanyana, Umatshini wokutya wepellet wezilwanyana lukhetho olufanelekileyo lokwenza ukutya kwezilwanyana njengokutya kwedada, ukutya kwenkukhu,Ukutya ngentlanzi njalo njalo. >90%.
Uncedo lwezixhobo ezenziwa ngepellet
Umgangatho wokuxheshiswa komatshini wethu wokupheka wepellet ngaphezulu 95%.
Iipellets ezivelisiweyo zinobukhulu obufanelekileyo kunye nobume,ilungele ukugcinwa.
Iipellets zinobukhulu obufanayo, Umphezulu otyibilikayo kodwa onexabiso eliphezulu lobalo.
Ukwenza i-pellet yindawo eshushu kwindawo yokucoca i-biomass world. Njengoko ixabiso lamalahle kunye neoyile lisanda ngokunyuka kunye nokugcinwa kwezikhombisi ezibini ezingemva kophuhliso kunye neemfuno zepetrol, i-biomass pellets njengobutyebi bamandla aluhlaza ziphuhliswa ngokukhawuleza. Ndiyabulela kumgangatho obanzi wesicelo sezinto ezingafunekiyo, iipellets zinokwenziwa ngokulula ngeendleko eziphantsi.
Zeziphi izixhobo ezinokuthi zifakwe kwiPellet?
Phantse yonke imveliso yamahlathi kunye nenkunkuma ye-agro inokwenziwa kwii-pellets ngumatshini wethu wokwenza i-pellet, njenge: Iinkuni Chip, Ukucheba, Isawdust, Igobolondo emnyama, I-Biogases zeswekile, I-Shell Caster / Isiqu, Ikofu Husk, Umdaka kaPaddy, Isiqu seLanga, Imigca yeCotton, Inkunkuma yeCuba, I-mustard Stalk, Inkunkuma yeJute, Uthuli lwe bamboo, Inkunkuma yeti, Ingca yevili, Khumbula Palm, Iimbotyi zakhumbula, I-Coir Pitch Bark / Straws, Irayisi Husks njl. Iipellets zokugqibela zinokusetyenziselwa ii-boilers zemizi-mveliso kunye nezityalo ezikhulu zamandla kunye nokushushubeza ekhaya okanye ukondla iinkukhu
Ukusetyenziswa komatshini wokuhambisa izilwanyana
★ umatshini wokutya wepellet wezilwanyana ulungele ukuqhubekeka ngeendlela ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo kwiipellets ezincinci zokutya ngenkukhu., idada, amarhanisi, izigwaca kunye nemfuyo kubandakanya neenkomo, inkomo, umvundla, yehagu, njl.
★ Izinto eziluhlaza kulula ukufumana, njengengqolowa, umbona, ingqolowa, irayisi, iimbotyi, njl.
★ Umatshini wokupheka ukutya kwenkukhu ngombane uthandwa, ifama yokufuya, kwifama yeenkukhu.
Ipharamitha yobugcisa kumatshini wokwenza i-pellet
Ividiyo yomatshini wokwenza i-pellet